စီးပွားရေးလုပ်ရင်း ရှာနေသော ငွေကြေး (၃) မျိုး | မာသင်
အကြောင်းအရာ (၃) မျိုးကို ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အရင်းအမြစ်များ (ငွေကြေး..စသည်)
ဒီ (၃) မျိုးဟာ ချိန်ခွင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လိုပဲ ပြောင်းလဲ ရွေးလျားနေပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှိတာ အချိန်ပါ။ အရင်းအမြစ် ဆိုတဲ့ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု ( ရွေ၊ ငွေ၊ အိမ်..အစရှိသည်) တို့မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး ၊ မိဘ ကျွေးရာစား၊ ထားရာနေ ၊ ရွေးချယ်စရာမခွင့်အလမ်း မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကြီးပြင်းလာပြီး ဘ၀ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကုန်ဆုံးမှုနှင့်အတူ .. အရင်းအမြစ် အချို့ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြသည်။ အရင်းအမြစ်နှင့် အတူ ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်း အချို့ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြသည်။ အချို့အတွက် ရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းသိပ်များများစားစားမရှိ၊ မနက် အိပ်ယာထလျင် မဖြစ်မနေ အလုပ်သွားကြရသည်။ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ ထိ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ နေပေးကြရသည်။ အချို့အတွက် တော့ .. ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အလုပ်သွားစရာမလို၊ မိသားစု နှင့် အတူခရီးထွက်နိုင်သည်၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာပဲ စာဖတ်နေနိုင်သည်။ သို့ပေမယ့် .. အားလုံး သည် အချိန်ဆိုသောအရာ တဖြေးဖြေး ရှားပါးလာသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီး ဘဝနေဝင်ချိန် နီးကပ်လာချိန်မှာတော့ … အရင်းအမြစ် အနည်းငယ်၊ ရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်း အနည်းငယ် နှင့် အချိန်အနည်းငယ် သာ ကျန်တော့သည်။
သင် …စီးပွားရေးလုပ်နေတာ ( ကြိုးစားနေတာ ….)
ဘယ်အရာကို ရှာ နေတာလဲ ?
ငွေကြေးတစ်ခု တည်း ရှာနေတာ ဆိုရင် မှားပါတယ်။
သေချာတာတစ်ခု က ကျွန်တော် တို့အိပ်ယာထဲလဲ နေချိန်မှာ
ဘယ်သူကမှ အလုပ်ပို မလုပ်ခဲ့လို့နောင်တ မရဘူး၊
ရတဲ့နောင်တ တွေ ဆိုတာ …
ဒီလို အချိန်တွေကို…. ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်း တစ်ခု အနေနဲ့အသုံးမပြု နိုင်ခဲ့ ခြင်း ဆိုတဲ့နောင်တပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးတွေ လုပ်ပြီး ငွေရှာနေတဲ့အကြောင်းရင်းက၊
အချိန် နဲ့ ရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်း ပိုရဖို့ ဆိုရင်…..
လက်ရှိမှာ အချိန် နဲ့ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရနေလျက်နဲ့
ငွေကြေးနောက်လိုက်ပြီး ပြောင်းပြန် မလုပ်မိစေနဲ့။
ပြန်တည့်ဖို့အချိန် မရှိတော့ဘူးလေ….။ ။
” သင့် ဘ၀ အကောင်းအဆိုး ( အရည်အသွေး) ကို ငွေကြေး နဲ့တိုင်းတာနေတယ်ဆိုရင်၊
သင့် ဘ၀ ကံဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူး၊
သင် … တိုင်းတဲ့ပေတံ မှားနေတာ။”